Bakhala ngokukhuphuka kweyokugibela ematekisini | News24
Bakhala ngokukhuphuka kweyokugibela ematekisini
isithombe: thami ka-nkosi Umgibeli ehlika etekisini esuka eMurchison.
INHLANGANO yamatekisi iSouth African Taxi Council (Santaco) isimemezele ukuthi imali yokugibela iyakhuphuka kusukela kuqale kwalenyanga (July).
Imali yokugibela ikhuphuke ngelandi (rand) elilodwa ezindaweni eziningi kodwa kwezinye izindawo abagibeli bazokhokha cishe upondo ngaphezulu.
Kwamanye amatekisi ikakhulukazi ahambela eMurchison, eMargate, oShabeni,eMthwalume naseGamalakhe ukubala izindawo ezimbalwa sikhona isexwayiso esitshela abagibeli ngokukhuphuka kwemali ematekisini.
Nakuba amalungu omphakathi engayithathi kalula eyokukhuphuka kwemali yamatekisi kodwa sekuzoba yinto okuyomele bephile nayo njengoba ukukhuphuka kugxekwa entengweni kaphethiloli ekhuphuka njalo. Iningi labanikazi bezimoto bakhala ngokuthi kuyabethusa ukuthi intengo kaphethiloli isikhuphuke yaze yafinyelela kumarandi angama-15 nemfalakahlana.
Amanye amalungu omphakathi athe ukunyuka kwentengo kaphethiloli, ukudla nokukhuphuka kwemali yokugibela ematekisini bakugxeka ekushintsheni kobuholi bezepolitiki.
Omunye umgibeli waseMargate uthi bekungenje ngesikhathi kuphethe uMnuz Jacob Zuma njengo Mengameli, kodwa manje njengoba sekuqhoqhobele uMnuz Cyril Ramaphosa zonke izinto zikhuphuka kanzima othe kwenza impilo ibe nzima.
“Amaholo awakhuphuki, kukhuphuka intengo yezinto zonke-nje kuphela, kudlalwa ngathi phela makunje,” kusho lomgibeli.
Elinye ilungu lomphakathi elingathandanga kudalulwe igama lalo lizwakale limemeza etekisini ngoMsombuluko ekuseni esuka eMurchison lithi nakuba kubonakala ukuthi isimo somnotho sithanda ukungabi sihle kodwa indaba yokukhuphuka kwemali yokugibela kubonakala kuzobhoboza amaphakethe kwabaningi.
UThabiso Mthembu ongumgibeli osebenzela eMargate uthi yena kuzomele akhokhe imali engango-R60 kuya ngaphezulu njengoba amatekisi asuka eMargate evele akhuphuka ngopondo wonke ekubeni eMarchison kuzokhokhwa ishumi ngaphezulu.
UWendy Mqadi waseNkothaneni osebenza ePort Shepstone uthi yena sekumele alungise imali engange-R48 uma eya noma ebuya emsebenzini, kodwa ekuqaleni ubekhokha u-R40 kuphela.
Uthe: “Okubi kakhulu wukuthi kwesinye isikhathi indlela abashayeli abashayela ngayo ngathi abacabangi ukuthi nathi lemali esiyikhokhayo sisuke siyisebenzela kanzima bona bavele bashayele ukuthanda kwabo futhi basiphathise okwezinhlanya.”
UMbalenhla Nxumalo ongumfundi wase-Marburg Secondary uthi nakuba kuzwela kubazali ukukhushulwa kwemali yokugibela ematekisini kodwa isizathu sicishe sibonakale njengoba izinto zithanda ukumba eqolo kulezi zinsuku.
Omunye wabagibeli uthi kuzoke kubenzima nakulabo abathanda ukuhlala ngaphambili njengoba sekufana nomgomo ukubala ushintshi. Okhulumela lenhlangano uMnuz Mandla Mzelemu uthe lokhu kuyinto ejwayelekile ngakho kuzomele umphakathi uyijwayele njengoba nabemboni yamatekisi bephoqwa isimo sokukhuphuka kwezinto.